Window7မှာ Hard Disk ကို Partition ခွဲနည်း / ပြန်ပေါင်းနည်း ~ IT Guide Myanmar
Window7မှာ Hard Disk ကို Partition ခွဲနည်း / ပြန်ပေါင်းနည်း
Tuesday, September 18, 2012 ဝင်းကမ္ဘာကျော် 8 comments
မင်္ဂလာပါ ... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးထားတာလေးကို မသိသေးသူအားလုံးအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်... သူမေးထားတာကတော့ Window7မှာ Partition ကို ဘယ်လို ခွဲရမလဲ ..? ပြီးတော့ ဘယ်လိုပြန်ပေါင်းရမလဲ ..? ဆိုပြီးမေးထားလေးပါ....
ဘယ် Software မှ သုံးစရာမလိုပါဘူး Window ပေါ်မှာပဲ ခွဲ/ပေါင်း လို့ရပါတယ်......။
Start >> Computer ကို Right Click နဲ့ Manage ကို နှိပ်ပါ (သို့) Run > diskmgmt.msc ကို ရေးထည့်ပြီး Enter ခေါက်လည်းရပါတယ်...။
ကျန်တာတွေကို ပုံလေးတွေအတိုင်း ဆက်လုပ်ပေးသွားပါ..။
Drive (C:) ကနေဥပမာ အဖြစ် ခွဲပြပါ့မယ်... အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း (C:) ပေါ်ကို Right Click နှိပ်ပြီး Shrink Volume ကိုရွေးပါ..။
ဒီနေရာမှာ မိမိ လိုချင်သလောက် ခွဲပါမယ်... 1GB ကို 1024 MB ရှိပါတယ် ..(မိမိ လိုသလောက် တွက်ချက်ပြီး ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါ) ကျနော်ကတော့ 30GB ခွဲမှာမို့ 30720 လို့ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ ပြီးရင် Shrink ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါ..။
ခုဆိုရင် နာမည်မပေးရသေးတဲ့ Partition လေးတစ်ခုရောက်လာပါပြီ... မပြီးသေးပါဘူး သူ့ကို နာမည်ပေး ကင်ပွန်းတပ်ဖို့ ကျန်ပါသေးတယ် ... နာမည်ပေးဖို့ Right Click ထောက်ပြီး New Simple Voulem ကိုရွေးပေးပါ..။
Next အဆင့်ဆင့် နှိပ်ပေးပြီး ...
နာမည်တစ်ခုရွေးပေးလိုက်ပါ .. ကျနော်ကတော့ G ကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်...။
Next အဆင့်ဆင့် နှိပ်ပေးပြီး Finsh ကိုနှိပ်ပါ..။
My Computer ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ မောင် G လေးအဖြစ်နဲ့ Patition လေးတစ်ခု ရောက်လာပါပြီ...။
Partition ခွဲနည်းကတော့ အဲ့ဒါပါပဲ ....။
မလိုချင်တော့လို့ ပြန်ပေါင်းချင်ရင်တော့... မောင် G ကို အရင်ဆုံး သတ်ပစ်ရပါလိမ့်မယ် :D
မောင် G ပေါ်ကို Right Click နဲ့ Delete Volume ကိုရွေးပါ..
ပြန်ပေါင်းဖို့ အတွက် (C) ပေါ်ကို Right Click နှိပ်ပြီး Extend Volume ကိုရွေးပါ ....
Next အဆင့်ဆင့်နဲ့ OK လိုက်ပါ..။
ခုဆိုရင် မောင် G လေးမရှိတော့ပဲ (C) ထဲကို ပြန်ရောက်သွားပါပြီ....။
အားလုံး နားလည်လွယ်အောင်မို့ အချိန်ပေးပြီး ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
SFXMaker 1.2.1 RC1 ကိုသုံးပြီး ပရိုဂရမ်တွေကို Auto...
Windows7အသုံးပြုသူများအတွက် Shortcut Icon ပြသနာအ...
Window7မှာ Hard Disk ကို Partition ခွဲနည်း / ပြန...
Corel Painter v12.2.0.703 partable
လေးစားရတဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေများအတွက် အစီရင်ခံစာ
တခြားမည်သည့်ပရိုဂရမ်မှသုံးစရာမလိုပဲ Ghost Windows...
ကွန်ပြူတာကို လေ့လာရာတွင် အသုံးဝင်မည့် နည်းလမ်းများ...
အသုံးမပြုတဲ့ Facebook Account တွေအဖျက်ခံရတော့ မယ် ...
15 OCTOBER 2012 ရက်နေ့တွင် FACEBOOK ၀ဘ်ဆိုက် DOWN ...
Gmail Hacking နှင့် ပါတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်များ
Administrator တိုင်း သိထားသင့်သည့် Windows7Comma...
Chrome browser နှင့် Firefox တွင် ဇော်ဂျီနှင့် ယူန...
How to Remove Shortcut Arrow on Icons in Windows (...
TMPGEnc Authoring Works v4.0.7.32 နှင့် Install လု...
WPA သို့မဟုတ် WPA2/PSK WiFi ဟက်နည်း
Write Protect ဖြုတ်ဖို့ နည်းလမ်းစုံသွားပြီလား
copy speed တိုးပြီးသုံးမယ်